Maamulka CakaaraNews Oo Kahadlay Doorashada 5aad Ee Itoobiya Kusoo Food Leh. - Cakaara News
Maamulka CakaaraNews Oo Kahadlay Doorashada 5aad Ee Itoobiya Kusoo Food Leh.
Jigjiga(CN) Sabti.Dec.13.2014, Sida la ogsoonyahay waxay doorsahada dalka Itoobiya kadhici doontaa bisha Ginbot ee sanadakan 2007-da tirsiga dalka taasoo ku aadan 4 bilood kadib. Waana doorashadaii 5aad ee wadanka kadhacda taniyo intii uu qabtay xisbiga haatan talada haya ee EPRDF.
Hadaba hadii aan sooyaalka fiirino ururka EPRDF ee wakhtigan talada haya waa urur halgan kuyimid oo leh aragti shacab islamarkaana Itoobiya oo lagu yaqaanay gaajo u horseeday in ay maanta leedahay qorshaha wadamada uu dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay. Tusaale hadii aan fiirino Addis Ababa hada kahor sida ay ahayd waxaan ognahay in maanta ay tahay meel isha caalamka ee maalgashi iyo dibloomasiba soo jiidatay.
Marka ay noqoto guud ahaan horumarkana waxaa la iska indhatiri karin isbadalka wayn gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka dhaqan-dhaqaale ee dalka Itoobiya. Waxaana isbadalkan u horseeday dastuurka mideeyay qoomiyadaha Itoobiya oo markii ay EPRDF qabanaysay xilka qarka u saarnaa in ay Itoobiyo burburto islamarkaana ay qoomiyaduhu kala shakisnaayeen. Waxayna yeesheen dastuurka mideeyay markii ay EPRDF qabatay.
Wixii kadanbeeyay 1997 tirsiga Itoobiya waxaa 3 jibaarmatay kalsoonida u dhaxaysa shacabka iyo EPRDF taasoo dhidibada u sii xidhay biyo-xidheenka wayn ee Abay oo ah mashruuc quwad koranto oo ugu wayn qaarada Afrika.
Hadaba markaan eegno doorasahada 5aad EPRDF waxay kalsooni badan kaqabtaa shacabka oo ay kukasbatay wax qabad iyo sinaan dimuqraadiyadeed waxayna Itoobiya maanta kusugantahay hawl, shaqo iyo talaabsi ay ka gudbayso dib u dhicii boqolaalanka sano soo maray.
Sidoo kale marka laga eego mucaaradku ma aha mid kusalaysan aragati shacab iyo dimuqraadiyad. Waxaana la ogsoonyahay in ay marar badan si sharci daro ah iyo xoog ay isku dayeen inay qalalaaso ka abuuraan dalka, kuwaas oo isticmaala siyaasada darbi-jiifnimada ah. Falalkaas oo ay mucaaridku ku fashilmeen shacabka Itoobiyana uu noqday shacab horumar.
Dadka siyaasada indha indheeya ayaa doorashadan ku tilmaamaya in ay EPRDF haysato fursad wayn iyo kalsooni ay shacabka la hortagto. Dalka ayaa maraya xaalad isbadal oo aad u wayn waxaana muuqda midha-dhalka qorshayaal iyo mashaariico waawayn kuwaas oo Itoobiya door taariikhi ah dhigi doona. Waxay Itoobiya gaadhay horumar balaadhan islamarkaana waxaa kor loo qaaday xidhiidhkii caalamka si ay uga mid noqoto wadamada dhaqaalahoodu dhex dhexaadka yahay.
Waxayna shacabka Itoobiya maanta kadharagsanyihiin waayo aragnimo, waxaana fashilmay fayraskii (Virus) wadamada carabta ee qalalaasaha kuburburnayay dawladaha taasna uu caalamku katalaalay.